Enwere Oge Karịrị Mwepụta nke Ntaneti Ọhụrụ? | Martech Zone
Wenezdee, Jenụwarị 17, 2018 Sunday, Jenụwarị 21, 2018 Douglas Karr
Ana m etinye obere oge na mgbasa ozi mmekọrịta. N'etiti algorithms na enweghị nkwanye ùgwù na enweghị nkwanye ùgwù, obere oge m na-etinye na mgbasa ozi mmekọrịta, enwere m obi ụtọ.
Peoplefọdụ ndị mụ na ha enweghị afọ ojuju agwala m na ọ bụ m kpatara ya. Ha kwuru na ọ bụ mkparịta ụka m na-emeghe banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na afọ ole na ole gara aga mepere ụzọ. Ekwenyere m n'eziokwu - ọbụna nghọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị - yabụ enwere m obi ụtọ na nkwenkwe m ma gbachitere ha kemgbe ọtụtụ afọ. Ọ rụghị nke ọma. Yabụ, n'ime afọ gara aga emere m nnukwu mbọ iji zere ịkpa nkata gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ịntanetị. Ihe na-adọrọ adọrọ bụ na ndị kparịrị m ka na-ada ụda dịka ha na-ekwutụ. Echere m na ha chọrọ naanị ka m gbachi nkịtị.
Ngosipụta zuru oke: Abụ m weirdo ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Enwere m mmasị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi na m hụrụ ahịa n'anya. Na m leanings bụ nnọọ ihe iju. Onwe m, ana m ejide onwe m ajụjụ iji nyere aka mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma. Na mpaghara, m na-emesapụ aka ma na-enwe ekele maka ụtụ isi iji nyere ndị ọzọ nọ ná mkpa aka. Otú ọ dị, na mba, ekwenyere m na anyị agafewo oge maka mgbanwe.
Enweghị m aja, mana nsonaazụ nke nnwere onwe m meghere m ka onye ọ bụla wakpo m. Ndị enyi m na mba ahụ dabere na aka ekpe kwere na m bụ onye na-azụ azụ, ọrụ akụ nri. Ndị enyi m ndị dabere na mpaghara ha na-eche ihe kpatara m ji soro ọtụtụ ndị Democrats. Na onwe m, ana m eleda anya ịbụ onye a kpọrọ aha n'akụkụ ọ bụla. Echeghị m na ọ dị mkpa ịkpọ ihe niile gbasara mmadụ ma ọ bụ echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị asị ma ọ bụrụ na ị kwenyeghị n'otu onye ma ọ bụ akụkụ nke echiche ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere m ike ịghọta maka ụfọdụ mgbanwe iwu na-eme taa na-asọpụrụghị ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke nyere ha iwu.
Laghachi na netwọkụ mmekọrịta.
Ekwenyere m na nkwa dị ịtụnanya nke mgbasa ozi mgbasa ozi bụ na anyị nwere ike ime ihe n'eziokwu, gwa ibe anyị, ghọta ibe anyị, ma bịarukwuo nso. Chei, m hiere ụzọ. Amaghị aha nke mgbasa ozi mmekọrịta yana ikike na-enweghị isi ịkatọ ndị ị nwere ike ilebara anya dị egwu.
Netwọk mmekọrịta na-agbaji, ikike ndị na-eme ka ọ ka njọ (n'echiche m).
On Twitter, asịrị nwere ya na ọ bụrụ na igbochi gị @Nkechiagha, achoputara gi dika nri aka nri ma di agbachitere - nke pụtara mmelite gị egosighi na iyi ọha. Amaghị m ma ọ bụ eziokwu, mana achọpụtala m na uto m na-ebelata. Akụkụ dị egwu nke a bụ na enwere m obi ụtọ na Twitter. M na-ezute ndị ọhụrụ, chọpụta akụkọ ndị dị ịtụnanya, na ịhụnanya ịkekọrịta ọdịnaya m ebe ahụ.
Ajụrụ m @jack, ma na ezi na-emeghe ejiji - enwebeghị m ịnụ nzaghachi.
hey @jack, M bụ nnukwu onye ofufe nke @Twitter na hụrụ na m nwere ike ịbụ #ihe banyere. Ọ ga-amasị m ka ị gụọ site na tweets ma gwa m ihe, banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị m, ọ bụ obi ọjọọ ma ọ bụ enweghị nkwanye ùgwù. N'ezie emechu ihu ịhụ nke a. Ọ bụrụ na ị na-egbochi ndị nwere ezi uche dịka m - nke ahụ karịrị egwu.
- Douglas Karr (@onyedikachi_) January 15, 2018
On Facebook, ha na-ekweta na ugbu a nzacha ndepụta ka onwe mkparịta ụka ndị ọzọ. Nke a, mgbe ọtụtụ afọ nke ịkwanye ụlọ ọrụ iji wuo obodo, dokwuo anya na mmekọrịta ha na ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa, na ụlọ ọrụ na-etinye ọtụtụ nde mmadụ n'ime njikọta, akpaaka, na mkpesa. Facebook weputara plọg kama.
N'uche m n'eziokwu, nleghara anya nke ndọrọndọrọ ọchịchị dị ize ndụ karịa nhụsianya n'onwe ha. Enweghị m nsogbu na nledo gọọmentị na akaụntụ mmekọrịta mmadụ na ibe ebe akaụntụ ahụ kwalitere ọrụ iwu na-akwadoghị, mana enwere m nnukwu nsogbu na ụlọ ọrụ na-eji nwayọ gbanwee arụmụka ahụ na ihu ọma ha ga-achọ. Facebook na-ahapụ isi mmalite akụkọ ruo votu izugbe. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a ga-eme ka afụ ahụ sie ike karị. Ọ bụrụ na ndị pere mpe ekwenyeghị, ọ dịghị mkpa - ha ga-eriju ọnụ ọgụgụ ka ukwuu ozi ha.
A Ga-enwerịrị Ezigbo Ntanetị
Fọdụ ndị kwenyere na Facebook na Twitter bụ ihe anyị rapaara. Ọtụtụ netwọk anwaala ịlụ ọgụ ma ha niile adaala. Anyị kwuru otu ihe gbasara Nokia na Blackberry n'ihe gbasara ekwentị. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na netwọk ọhụrụ nwere ike ọ ga-achịkwa ahịa ahụ mgbe ọ na-akwado otu nnwere onwe nke nyeere Twitter na Facebook aka.
Okwu ahụ abụghị echiche ọjọọ, ọ bụ àgwà ọjọọ. A naghịzi atụ anya ka anyị jiri nkwanye ugwu na-ekwenyeghị na ndị anyị na-ekwenyeghị. Ihe a na-atụ anya ya taa bụ ihe ihere, ịkwa emo, iji ike emegbu mmadụ, na ịgbachi ndị mmechuihu nkịtị. Lọ ọrụ mgbasa ozi anyị gosipụtara omume a. Ọbụna ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị ejirila omume a.
M a nnukwu ofufe nke inwe a iche iche nke echiche. Enwere m ike ikwenye gị ma na-asọpụrụ nkwenkwe gị. O bu ihe nwute, ebe anyi tinyere aka na uzo abuo, anyi na-adi ka anyi na-akporita ibe anyi isi karia iweputa uzo di n’etiti ha nile.
Nke a nwere ihe ọ bụla metụtara ahịa?
Mgbe achọtara ndị na-ajụ ase (akụkọ, ọchụchọ, na mmekọrịta mmekọrịta) na-etinye aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ na-emetụta azụmahịa ọ bụla. Ọ metụtara m. Obi abụọ adịghị ya na nkwenkwe m emetụtala azụmahịa m. Adịkwaghị m arụ ọrụ maka ndị isi na ụlọ ọrụ m nke m lere anya ma mụta site na ya n'ihi na ha gụrụ echiche m n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee tụgharịa azụ.
Ma ugbu a, anyị na-ele anya ka ndị dike na-elekọta mmadụ ikpe ziri ezi n'akụkụ ọ bụla nke ụdịdị dị iche iche na-ejide ụdị maka ebe ha debere mgbasa ozi ha, na ihe ndị ọrụ ha na-ekwu n'ịntanetị. Ha na-akwado boycotts c nke na-emetụtaghị ndị isi azụmaahịa, mana ndị ọrụ ọ bụla n'ime na obodo ndị gbara ha gburugburu. Otu tweet nwere ike ịkọwa ọnụahịa ngwaahịa, merụọ azụmahịa, ma ọ bụ bibie ọrụ. Agaghị m achọ ka ndị na-ekwenyeghị n’echiche m taa ha ahụhụ maka nke ha. Nke a karịrị akarị. Nke a anaghị arụ ọrụ.
Ihe ihe niile a rụpụtara bụ na azụmaahịa na-eweghachi na soshal midia, anabataghị ya. Azụmaahịa na-abaghịzi uru, ọ bụghị n’ụzọ doro anya. Ndị isi azụmaahịa na-ezochi nkwado ha maka echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ọ bụghị ịkwalite ya.
Anyị chọrọ ezigbo netwọkụ mmekọrịta.
Anyị chọrọ usoro iji kwụọ ụgwọ nsọpụrụ, mgbapụta, na nsọpụrụ. Anyị chọrọ sistemụ na-akwalite echiche dị iche iche kama iwepụta ọnụ ụlọ e ji ewe iwe. Anyị kwesịrị ịkụziri ibe anyị ihe ma kpughee ibe anyị na echiche ndị ọzọ. Anyị kwesịrị ịnabata echiche ndị ọzọ.
Enweghị oge ka mma karịa ugbu a iji zụlite ịkparịta ụka n'socialntanet dị ka nke a.
Tags: FacebookJackndọrọ ndọrọ ọchịchịshadowbanagbachitereTwitterga -eziga ozi